Julio Cortázar: uri maka Paris na Buenos Aires, uri maka ndụ | Akwụkwọ akụkọ
Okwu sitere na Julio Cortázar
Julio Cortázar bụ onye ode akwụkwọ a ma ama nke Argentine bụ onye pụtara ìhè na mpaghara agụmagụ ụwa maka ịpụiche nke ederede ya. Mmalite ya mere ka o wepụta akwụkwọ uri dị egwu, akwụkwọ akụkọ, mkpirisi akụkọ, mkpirisi prose na ụdị dị iche iche. Maka oge ahụ, ọrụ ya mebiri na paradigms; ọ gara na nnwere onwe zuru oke na ọchịchị n'etiti surrealism na eziokwu anwansi.
N'ime ogologo ọrụ ya, Cortazar ọ rụrụ akwụkwọ siri ike nke ọtụtụ akwụkwọ bara uru. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla a na-ewere dị ka otu n'ime ndị isi na-ede akwụkwọ nke ihe odide edemede a maara dị ka "latin american boom". Ọ rụkwara ọrụ a ma ama dị ka onye nsụgharị na Unesco na n'ụlọ obibi ụfọdụ. N'ime ọrụ ikpeazụ a, ọrụ ya na ọrụ nke: Edgar Allan Poe, Daniel Defoe, André Gide, Marguerite Yourcenar na Carol Dunlop pụtara.
1 Ọrụ uri Julio Cortázar
1.1 Ọnụnọ (1938)
1.2.1 "Nkwụghachi ụgwọ"
1.3 Chekwa chi jiri (1984)
1.3.1 "Mmepụta ugboro abụọ"
2 Abụ ndị ọzọ nke onye edemede
2.2 "Ezigbo nwa"
2.3 "Ndị enyi"
2.4 "Ezi afọ ọhụrụ"
3 Nchịkọta akụkọ ndụ nke onye edemede
3.1 Laghachi na Argentina
3.2 Oge nwata siri ike
3.3 Obere odee
3.5 Ahụmahụ ọrụ
3.6 Ntozu dị ka onye ntụgharị na mmalite nke akwụkwọ gị
Ọrụ uri Julio Cortázar
E bipụtara ihe odide ahụ na 1938 n'okpuru pseudonym Julio Denis. Ọ bụ mbipụta nwere oke nke Editorial El Bibliófilo weputara ya. Naanị 250 ka e bipụtara, bụ́ nke nwere ụda ụda 43. N'ime uri ndị a, egwu egwu meriri, na mgbakwunye na ịchọ nkwekọ na udo. Cortazar Ọ naghị eji ọrụ a nganga, o weere ya dị ka ihe na-akpali akpali na nke na-etobeghị, ya mere ọ jụrụ ibipụtaghachi ya.
Na 1971, n'ajụjụ ọnụ JG Santana, onye edemede ahụ kwuru banyere ọrụ ndị a: "Mmehie nke ntorobịa nke ọ na-adịghị onye maara na nke m na-egosi na ọ dịghị onye. A na-ezobe ya nke ọma…”. Ọ bụ ezie na amachaghị banyere akwụkwọ a, a napụtara ụfọdụ n'ime sonnet ndị ahụ, otu n'ime ha bụ:
Ha na-eme ememe abalị okpukpu abụọ, na-echere
nke mma agha oroma - wụsara
enweghi ngwụcha, oleander na anụ nwere nku-
na lilies na-egwuri egwu n'oge opupu ihe ubi.
Ha na-agọnarị - jụ onwe gị - wax swans
mma-akpa-aka nke mma-agha mere;
ha na-aga-aga gi-n'ebe ugwu no ebe
igwu mmiri ruo mgbe anyanwụ nwụrụ.
A na-emepụta mgbidi nke ụgbọ elu pụrụ iche.
Ihe diski, diski ahụ! Lee ya, Jacinto,
chenu otú o si weda idi-elu-ya nye gi!
Egwu igwe ojii, melopea
tinye ka ọ bụrụ maka ụgbọ elu ya
nke ga-abụrịrị ili mgbede.
Ọ bụ nchịkọta uri mbụ e bipụtara n’aha ya. Ọ bụ nchịkọta nke nwere ọtụtụ uri ya. Cortázar enweghị mmasị n'iwepụta uri ya, ọ na-eme ihere nke ukwuu ma na-akpachapụ anya maka ihe ndị o dere na ụdị a. N'okwu a, o kwuru, sị: "Abụ m onye na-ede uri ochie [...] ọ bụ ezie na m na-edebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile edere n'ahịrị ahụ na-ebipụtaghị ihe karịrị afọ iri atọ na ise."
N'afọ 2017, Editorial Nórdica turu onye odee ụtụ site n'ibipụta ọrụ a, nke gosipụtara uri o dere site na 1944 ruo 1958. E kewara akwụkwọ ahụ ụzọ isii - Onye ọ bụla nwere aha ya -, nke nwere n'etiti abụ abụọ na anọ, na-enweghị njikọ dị n'etiti ha ma ọ bụ ụbọchị nkọwa. N'agbanyeghị ọdịiche dị ịrịba ama dị n'etiti nke ọ bụla n'ime ederede - enweghị ndaba na onye nata ya, isiokwu ahụ, njupụta ya ma ọ bụ ụda - ha na-ejigide ụdị njirimara ha. Mbipụta a gosipụtara ihe atụ nke Pablo Auladell. Otu n'ime abụ a bụ:
Ọ bụrụ na amaghị m ihe ọ bụla gbasara ọnụ gị ma olu
na ara gị naanị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ oroma nke uwe elu nwanyị.
otu esi etu ọnụ inwe gị
Kariri amara nke onyinyo nke nāgabiga miri.
Na ebe nchekwa m na-ebu mmegharị ahụ, pout
lee ka o si mee ka m nwee obi ụtọ, na otú ahụ
ịnọrọ n'ime onwe gị, ya na agbagọ
ezumike nke ihe oyiyi ọdụm.
Nke a abụghị nnukwu ihe m hapụrụ.
Ọzọkwa echiche, iwe, theories,
aha ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị,
adreesị ozi-e na ekwentị,
foto ise, otu isi isi,
nrụgide nke obere aka ebe onye ọ bụla ga-asị
na ụwa na-ezonarị m.
Ana m ebu ihe niile na-agbasi mbọ ike, na-atụfu ya nke nta nke nta.
Agaghị m echepụta ụgha na-abaghị uru nke ebighị ebi;
ka mma iji aka gị gafee àkwà mmiri
juputara na gi,
na-adọkasị ebe nchekwa m,
inye ya nduru, nye ndi kwesiri ntukwasi-obi
nza, ka ha rie unu
n'etiti egwu na mkpọtụ na ịkụ ọkpọ.
Ewezuga chi jiri (1984)
Ọ bụ nchịkọta uri nke onye edemede bipụtara obere oge ka ọ nwụsịrị. Ederede bụ ngosipụta nke mmasị gị, ncheta na mmetụta gị. Ihe odide ndị a na-agbanwe agbanwe, na mgbakwunye na ahụmahụ ya, ha na-egosi ịhụnanya ya maka obodo ya abụọ: Buenos Aires na Paris. N'ọrụ ahụ ọ nyekwara ụfọdụ ndị na-ede uri bụ ndị gosipụtara ịdị adị ya ụtụ.
Ewezuga chi jiri...
Na 2009, Editorial Alfaguara wepụtara mbipụta ọhụrụ nke nchịkọta uri a, nke gụnyere ihe odide nke mmezi ndị odee mere. Ya mere, e deziri ihie ụzọ ndị dị na akwụkwọ mbụ ahụ na mbipụta ndị ọzọ. Sonnet ndị a bụ akụkụ nke akwụkwọ a:
"Mmepụta ugboro abụọ"
Mgbe rose na-akpali anyị
ezoro ezo usoro nke njem ahụ,
mgbe n'oge ọdịda
okwu snow na-ehichapụ,
a ga-enwe ịhụnanya na-emecha na-ewe anyị
gaa n'ụgbọ mmiri ndị njem,
na n'aka a na-enweghị ozi
ọ ga-akpọte ihe ịrịba ama gị dị nro.
Echere m na m bụ n'ihi na m chepụtara gị,
alchemy ugo na ifufe
site na aja na ọchịchịrị;
na gị na nche ahụ na-agba ume
onyinyo nke i ji na-amuma n'arum
ma ọ na-atamu ntamu na ị chepụtara m.
Abụ ndị ọzọ nke onye edemede
N'abalị a aka m dị oji, ọsụsọ na-agbakwa m obi
dị ka mgbe agha chefuo na anwụrụ centipedes.
A hapụla ihe niile ebe ahụ, karama, ụgbọ mmiri,
Amaghị m ma hà hụrụ m n’anya, nakwa ma hà tụrụ anya ịhụ m.
N'akwụkwọ akụkọ dina n'elu akwa ọ na-ekwu nzukọ diplomatic,
onye nyocha sangria tie ya obi ụtọ n'ọgba anọ.
Oke ọhịa gbara ụlọ a n'etiti obodo ahụ gburugburu.
Amaara m na ọ dị m ka onye ìsì na-anwụ n’ebe ahụ.
Nwunye m na-arịgo na mgbada obere ubube
dị ka onyeisi ndị agha nke na-atụkwasịghị kpakpando obi….
Agaghị m ama otú m ga-esi tọpụ akpụkpọ ụkwụ m ma mee ka obodo ahụ taa m ụkwụ
Agaghị m aṅụbiga mmanya ókè n'okpuru àkwà mmiri, agaghị m eme ntụpọ n'ụdị.
Ana m anabata akara aka nke uwe elu ígwè,
M na-aga na sinima n'oge, m na-enyefe ụmụ nwanyị oche m.
Ogologo oge ọgba aghara nke uche dị njọ nye m.
Na ụtaba, na kọfị, na mmanya,
na nsọtụ abalị ka ha na-ebili
dị ka olu ndị ahụ na-abụ n'ebe dị anya
n'amaghi ihe, n'uzo.
Brothersmụnna nwoke nwere akara aka,
Dioscurios, onyinyo cha cha, ha na-atụ m ụjọ
ijiji nke agwa, ha jide m
ịnọrọ n'elu mmiri n'etiti oke ikuku.
Ndị nwụrụ anwụ na-ekwu okwu karịa na ntị,
na ndi di ndu bu aka di oku na ulo,
nchikota nke uru na ihe furu efu.
Otu ụbọchị n'ụgbọ mmiri nke onyinyo,
site na nnọọ oke obi m ga-echebe
ọmịiko ochie a nke na-akpọ ha.
"Ezi afọ ọhụrụ"
Lee, anaghị m arịọ nke ukwuu
naanị aka gị, nwee ya
dị ka obere toad na-arahụ ụra nke ọma dị ka nke a.
Achọrọ m ọnụ ụzọ ahụ nke i nyere m
ịbanye n'ụwa gị, obere mpempe ahụ
nke shuga na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke gburugburu obi ụtọ.
Ị gaghị agbazinye m aka gị n'abalị a
Ubọchi afọ ọhụrụ nke ikwiikwii na-agba agba?
Ị nweghị ike, n'ihi teknuzu ihe. Mgbe ahụ
M gbatịa ya na ikuku, na-akpa mkpịsị aka ọ bụla.
piich silk nke nkwụ
na azụ, obodo nke osisi anụnụ anụnụ.
Ya mere, m na-ewere ya jide ya, dị ka
ọ bụrụ na ọ dabere na ya
usoro nke oge anọ,
ọkpa-ọkpa-nri, ihun-anya madu.
A mụrụ Julio Florencio Cortázar na August 26, 1914 na mpaghara ndịda nke Ixelles na Brussels, Belgium. Nne na nna ya bụ María Herminia Descotte na Julio José Cortázar, ha abụọ sitere na Argentine. N'oge ahụ, nna ya jere ozi dị ka azụmahịa attaché nke Argentine Embassy.
Laghachi na Argentina
Mgbe Agha Ụwa Mbụ na-achọ ịkwụsị, ezinụlọ ahụ jisiri ike si Belgium; Ha rutere Switzerland nke mbụ wee bịarute Barcelona. Mgbe Cortázar dị afọ anọ, ọ rutere Argentina. Ọ biri ndụ nwata ya na Banfield - ndịda Buenos Aires - yana nne ya, nwanne ya nwanyị Ofelia na nwanne nne ya.
Oge nwata siri ike
Maka Cortázar, ọ bụ nwata nwere mwute. Ọ tara ahụhụ a gbahapụrụ nna ya mgbe ọ dị afọ 6 ma ọ nụghịkwa ya ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-etinye oge dị ukwuu n'àkwà, n'ihi na ọ na-enwekarị ọrịa dị iche iche. Otú ọ dị, ọnọdụ a mere ka ọ dịkwuo nso n'ịgụ ihe. Mgbe ọ dị nanị afọ itoolu, ọ gụọla Victor Hugo, Jules Verne na Edgar Allan Poe, nke mere ka a na-arọ nrọ ugboro ugboro.
Ọ ghọrọ nwa okorobịa pụrụ iche. Na mgbakwunye na ịgụ ihe ọ na-agụkarị, o ji ọtụtụ awa mụọ akwụkwọ ọkọwa okwu Little Larousse. Ọnọdụ a bịara na-echegbu nne ya nke ukwuu nke na ọ gara leta onye isi ụlọ akwụkwọ ya na dọkịta jụọ ha ma ọ̀ bụ omume nkịtị. Ndị ọkachamara abụọ ahụ dụrụ ya ọdụ ka ọ zere ịgụ nwa ahụ ihe dị ka ọkara afọ, ọ dịkarịa ala, nakwa ka ọ na-asachapụ anwụ.
Mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10, Cortázar dere obere akwụkwọ akụkọ, na mgbakwunye na akụkọ ụfọdụ na sonnets. Ọrụ ndị a enweghị atụ, nke mere ka ndị ikwu ya ghara ntụkwasị obi na ọ bụ ya mere ha. Onye edemede ahụ kwuputara ọtụtụ oge na ọnọdụ a kpatara ya nnukwu nsogbu.
Ọ gara ụlọ akwụkwọ elementrị na ụlọ akwụkwọ No. 10 na Banfield, wee banye Mariano Acosta Normal School of Teachers. Na 1932, ọ gụsịrị akwụkwọ dị ka onye nkuzi nkịtị na afọ atọ ka e mesịrị dị ka Prọfesọ nke Akwụkwọ Ozi. Mgbe e mesịrị, ọ debanyere aha na Mahadum Buenos Aires ka ọ mụọ nkà ihe ọmụma. Ọ kwụsịrị mgbe ọ gafechara afọ mbụ, ebe o kpebiri ịrụ ọrụ ya iji nyere nne ya aka.
Ọ malitere izi ihe n'obodo dị iche iche na mba ahụ, gụnyere Bolívar na Chivilcoy. N'ikpeazụ, ọ dịrị ndụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ isii (1939-1944) ma kụziere ndebanye aha akwụkwọ na Ụlọ Akwụkwọ Nkịtị. Na 1944, ọ kwagara Mendoza wee kuzie akwụkwọ ọmụmụ French na Mahadum Mba nke Cuyo. N'oge ahụ, o bipụtara akụkọ mbụ ya, "Witch", na magazin Akwụkwọ ozi.
Afọ abụọ ka e mesịrị - mgbe mmeri nke Peronism -, Ọ gbara arụkwaghịm n'ọrụ nkuzi ya wee laghachi Buenos Aires, ebe ọ malitere ịrụ ọrụ na Ụlọ Akwụkwọ Argentine. N'oge na-adịghị anya, o bipụtara akụkọ "Ụlọ weere" na magazin Akwụkwọ akụkọ nke Buenos Aires — Jorge Luis Borges na-elekọta ya—. Mgbe e mesịrị, o wepụtara ọtụtụ ọrụ na magazin ndị ọzọ a ma ama, dị ka: Eziokwu, Na na Akwụkwọ akụkọ ọmụmụ oge gboo sitere na Mahadum Cuyo.
Ntozu dị ka onye ntụgharị na mmalite nke akwụkwọ gị
Na 1948, Cortázar ruru eru dị ka onye ntụgharị si Bekee na French. Ihe ọmụmụ a were afọ atọ iji gụchaa ya, ma ọ were naanị ọnwa itoolu. Otu afọ ka e mesịrị, o wepụtara abụ mbụ e ji aha ya bịanyere aka na ya: “Los reyes”; Ọzọkwa, o bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya: Ihe ọchị. Na 1951 ọ wepụtara Bestiary, ọrụ na-achịkọta akụkọ asatọ ma nye ya amara na Argentina. N'oge na-adịghị anya, ọ kwagara Paris n'ihi esemokwu ya na gọọmentị President Perón.
Na 1953 ọ nakweere atụmatụ nke Mahadum Puerto Rico ka ọ sụgharịa akwụkwọ akụkọ zuru oke na prose nke Edgar Allan Poe.. Ndị nkatọ lere ọrụ a anya dị ka ndegharị kacha mma nke ọrụ onye odee America.
Mgbe ihe karịrị afọ 30 biri n'ala French, Onye isi ala François Mitterrand nyere ya mba. N'afọ 1983, onye edemede ahụ laghachiri na nke ikpeazụ - mgbe nlọghachi na ọchịchị onye kwuo uche ya - na Argentina. N'oge na-adịghị anya, Cortázar laghachiri na Paris, ebe Ọ nwụrụ na February 12, 1984 n'ihi ọrịa leukemia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Julio Cortázar: abụ
Anne Rice: biography na ya kasị mma akwụkwọ